Fahafatesana ankoatra ny covid-19: nomena alalana ny fahafahana mitondra razana any amin’ny faritra - ewa.mg
News - Fahafatesana ankoatra ny covid-19: nomena alalana ny fahafahana mitondra razana any amin’ny faritra
Anisan’ny nivoitra tamin’ny
filankevitry ny minisitra, omaly teny Iavoloha ny fahafahana
mitondra ny razana any amin’ny faritra. « Napetraka any
amin’ny efitra mangatsiaka « chambre froide » teny
anivon’ny hopitaly eto Antananarivo ny razan’ireo olona sasany avy
any amin’ny faritra nodimandry teto Antananarivo. Maro anefa ireo
fianakavian’ny maty mikasa ny hitondra ny razana tsy matin’ny
covid-19 any amin’ny faritra koa omena alalana izy
ireo », hoy ny tatitra. Na izany aza anefa, misy ny
fepetra napetraky ny fanjakana, amin’ny alalan’ny polisim-pirenena
fitakina taratasy fanamarinana ny fahafatesana avy amin’ny BMH,
miampy ny taratasin’ny dokotera nitsabo.
Ny fanamarinana avy amin’ny BMH
hatrany, na vokatry ny areti-mifindra na tsia ny nahafaty azy na
koa mifandray na tsia amin’ny covid-19 koa izany teo aloha. Manampy
izany ny fanomezan-dalana momba ny fandefasana ny razana avy any
amin’ny delegen’ny boriborintany. Notsiahivina amin’izany koa ny
taratasy milaza ny anaran’ny hopitaly nitsaboana ilay maty ka ho
entina any amin’ny faritra ny razana. « Entanina ny
lehiben’ny hopitaly hanome ny lisitry ireo matin’ny covid-19
hampidirina anaty rindram-baikon’ny solosaina. Jerena koa ny momba
ny vatapaty itondrana ny razana. Hisorohana ny mety ho hosoka ny
anton’izany rehetra izany. Iharan’ny sazy ireo manao
hosoka », hoy ny tatitra.
Fametrahana ny faritra
Etsy andaniny, nankatoavina ny
volavolan-dalàna hametrahana ny faritra faha-23 rehefa
nasiam-panitsiana momba ny ho enti-manana eny anivon’ny
vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny fikarakarana ny fifidianana
ary ny fampihodinana sy ny anjara asan’ireo rantsa-mangaikan’izy
ireo indrindra ahafahana mametraka ny faritra faha-23.
Araka izany, tsy ho ela intsony ny
hisarahan’ny faritra Vatovavy sy i Fitovinany. Na izany aza mbola
adihevitra be io eo anivon’ny Antenimiera.
L’article Fahafatesana ankoatra ny covid-19: nomena alalana ny fahafahana mitondra razana any amin’ny faritra a été récupéré chez Newsmada.
TOAMASINA-SOANIERANA IVONGO :: Ankizilahy roa samy maty an-drano
Tranga nifanandrify. Dimy ambin’ny folo taona sy enina ambin’ny folo taona ireto ankizilahy roa hita faty tao anaty rano, tany Toamasina sy Soanierana Ivongo, omaly maraina. Samy maty an-drano izy roa lahikely ireo araka ny nambaran’ny loharanom-baovao. Natelin’ny ranomasina tao Canada Toamasina ny ankizilahy iray, dimy ambin’ny folo taona, afak’omaly tolakandro. Nifampitadiavana izy, nanomboka teo. Nitohy omaly maraina ny fikarohana azy tao anaty rano. Niafara tamin’ny fahitana ny vatana mangatsiakany, tokony ho tamin’ny sivy ora. Nandro kosa ity ankizilahy iray, enina ambin’ny folo taona, rehefa avy nanasa lamba tany Sahantirono Soanierana Ivongo, tamin’ny afak’omaly tolakandro ihany. Nilomano naka kapa lasan’ny rano izy no tra-doza. Tonga teny amin’ny faritra lalina ilay ankizilahy no nilentika. Ny ampitso maraina ihany koa (ndrl: omaly) no nahitana ny razana tao anaty rano. L’article TOAMASINA-SOANIERANA IVONGO :: Ankizilahy roa samy maty an-drano est apparu en premier sur AoRaha.
Nidina ifotony tany Ankadinondry Sakay sy Tsiroanomandidy, faritra Bongolava, ny vaomiera manokana Task Force, iarahan’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS) sy ny ao amin’ny minisiteran’ny Asa, tamin’ity herinandro ity. Notetezina ny toeram-pivarotana sy ny orinasa tsy miankina samihafa. Tanjona ny hanarahan’ny mpampiasa ny lalà na ka hampidirana ny mpiasa ho mpikambana ao amin’ny CNaPS.Nampianarina ny mpiasa koa ny tombontsoa omen’ny Tahirim-pirenena, ka misy ny antontan-taratasy fenoina. Miainga any amin’ny volan’ny bevohoka, ny an’ny mpitaiza kely, ny fanonerana ny lany teo am-piterahana, ny antsasa-karama, ny volan-jaza, ny solo takaitra sy ny saram-pitsaboana ho an’ny tra-doza am-perinasa, ny fisotroan-dronono, sns.Nizaran’ny Task Force taratasy ho fenoina izy ireo ary tsy maintsy aterina mialoha any amin’ny CNaPS, ny 26 aogositra ho avy izao.Nisy koa ny fanofanana ireo tompon’andraiki-panjakana sy ny mpandraharaha tsy miankina, notarihin’ny talen’ny Fanaraha-maso Cnaps, Razafindraibe Jean Jacques, nampahafantarana ny lalàna mifehy ny asa. Tanjona ny hisian’ny asa mendrika araka ny baikon’ny fanjakana.Njaka A.L’article Tsiroanomandidy: miara-miasa ny CNaPS sy ny minisiteran’ny Asa a été récupéré chez Newsmada.
Masoivoho japoney: mifampiankina ny fitoniana sy ny fampandrosoana
Antoky ny fandrosoan’ny firenena ny fandriampahalemana ary, rehefa milamina ny tany, tsy voatohintohina ny toekaren’izao tontolo izao. Io ny fototry ny fiaraha-miasan’i Japon amin’i Madagasikara, araka ny nohamafisin’ny ambasadaoro japoney eto amintsika, i Ichiro Ogasawara, omaly teny amin’ny trano fonenany eny Ivandry.Notanterahina, tamin’io fotoana io, ny fampahafantarana ireo endri-piaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta. Mifototra amin’ny antsoina hoe « Aide publique au développement » na APD izany. Notsiahivin’ny masoivoho fa nasiam-panavaozana io APD io ny taona 2013, ary napetraka ho satan’ny fiaraha-miasa ho an’ny fampandrosoana.Matetika, ao an-tsain’ny sasany fa misy tambiny avokoa ny fanampiana avy amin’ireo firenen-dehibe. Araka ny hita ao anatin’ilay sata anefa, mifamatotra sy mifampiankina i Japon sy ireo firenena misandratra sy ireo an-dalam-pandrosoana, toa an’i Madagasikara.Raha mirongatra ny tsy fitoniana aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, hisy fiantraikany amin-dry zareo izany, araka ny voasoratra amin’ilay sata. Nomarihin’ny ambasadaoro fa tsy manana loharanon-karena voajanahary izy ireo. Miankina amin’ireo firenena manan-karena izany, toa an’i Madagasikara.Antony hanamafisan’i Japon ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa amintsika sy amin’i Afrika, amin’ny alalan’ny Ticad na ilay fivoriambe iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ity kaontinanta ity izany.Mivelatra ny fanampiana mivantana amin’ny alalan’ny Jica Endri-piaraha-miasa faharoa ny fanampiana mivantana, amin’ny lafiny efatra ary tanterahin’ny Jica. Maro ireo tetikasa momba ny fampandrosoana, toy ny Papriz, ao anatin’ny andiany faharoa, amin’izao fotoana izao.Eo ny tetikasa momba ny fampiroboroboana ny toekarena, amin’ny alalan’ny fananganana fotodrafitrasa, toy ny seranan-tsambon’i Toamasina. Efa vita ny 30%-n’ny asa.Manampy izany sosialy toy ny fanamboarana sekoly. Misy koa ny fandaharanasa fampiofanana ka efa nisitraka izany ny Malagasy miisa 1 070, hatramin’ny taona 2017.Landy R.L’article Masoivoho japoney: mifampiankina ny fitoniana sy ny fampandrosoana a été récupéré chez Newsmada.
Vaky ny asabotsy teo ny fonjaben’i Mananara Avaratra. Gadra miisa sivy indray tafatsoaka ka voasambotra taorian’ny tifitra nahazo azy ireo ny roa amin’ireo. Voalazan’ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana fa efa voaomana mialoha ihany izao fitsoahana fonja nataon’ireto gadra ao amin’ny fonjan’i Mananara Avaratra ity izao. Tao anaty fahatapahan-jiro lavareny no nanararaotan’ireo gadra nandositra ny fonja. Niandry ny delestazy ry zalahy ka nandritra izany ny nanatanterahan’izy ireo ny teti-dratsin’izy ireo. Nipaika ny tamin’ny 8 ora tamin’io asabotsy hariva io, maizina ny tanàna. Nirohotra nanosika ny vavahadibe ny gadra rehetra tao am-ponja. Tsy nanampo na inona na inona ireo mpiandry fa ny vavahady nipoaka mafy be no nahataitra azy ireo. Nanao tifi-danitra ireo mpiandry fonja hanakanana ireo voafonja efa tafavoaka ny fonja. Tsy nahasakana ireo voafonja anefa izany fa vao mainka nampirifitra azy ireo. Ankoatra ireo nivoaka teo amin’ny vavahady, nisy koa ireo nitsoaka niakatra avy eny ambony tafon-trano. Raikitra ny fifanjevoana tao am-ponja, nizara roa ireo mpiandry fonja, nisy ireo nanohana ireo gadra nikasa hivoaka teo amin’ny vavahady. Tao koa ireo niambina ireo gadra nivoaka avy eny an-tafon-trano. Miisa sivy, araka izany, ireo gadra tafatsoaka ny fonja. Nitifitra avy hatrany ny mpiandry fonja ka voatifitra ny roa raha tafatsoaka kosa ireo gadra fito. Efa mandeha ny fikarohana ao an-tampon-tanànan’i Mananara Avaratra ataon’ny mpitandro filaminana miaraka amin’ireo mpiandry fonja na eo aza ny fitsoahan’ireo gadra. Somary efa antitra ihany koa ity fonjaben’i Mananara Avaratra ity ka isan’ny nanamora ny fitsoahan’ireo gadra izany satria na ny rindrina aza, efa malemy. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky ihany ireny fonja efa antitra ireny hialana amin’ny fitsoahana gadra faobe toy izao.J.C L’article Mananara Avaratra: vaky ny fonja, gadra fito tafaporitsaka a été récupéré chez Newsmada.
Tena marina ny hoe tsy misy jamba toy izay minia mikimpy? Na marenina toy izay minia marenina… Inona, hono, ny zavatra miova eto amin’ny firenena amin’izao? Izay ny vavan’ny mpanohitra sasany. Tena tsy misy tokoa ve izay? Na minia mikimpy sy marenina na entin’ny fankahalana, hany ka maizina avokoa ny zava-drehetra.Aza gaga raha tofoka amin’ny afitsoky ny mpanao na ny mpilalao politika ny ankamaroan’ny olona. Toy ny hoe ny tena ihany no inona: manao zavatra, mahavita zavatra. Fony teo amin’ny fitondrana, ohatra, misy sahy miantsanantsana fa izay tsy natao tao anatin’ny 50 taona, vita iray volana na herintaona. Izany moa ny inona?Rehefa eo amin’ny fitondrana, toy ny hoe ny tena ihany no hany tia tanindrazana, mahalala sy mitsinjo vahoaka… Tsy vitan’izany, hany tokana an-tany manao sy mahavita zavatra hoe fampandrosoana. Manginy fotsiny, izay mahita na milaza zavatra ankoatra izany: soketaina ambony ihany ho fahavalom-pirenena, manakorontana, potehina…Rehefa tsy eo amin’ny fitondrana indray, tabatabaina fa famonoana vahoaka sy famotehana firenena izay rehetra ataon’ny mpitondra. Tena tsy misy na inona na inona miova tokoa ve eo amin’ny tany sy ny fanjakana? Na eo amin’ny fiainam-bahoaka… Aleo ny tsirairay no mitsara fa tsy izay lazaina sy hitan’ny tena no hany marina.Ny zava-doza: manakorontana rehefa tsy mahasarika sy mahazo vahoaka amin’izany. Tsy mety misy fiovana ny fomba fanaovana politika? Tsy firy ny mijery amin’ny maso tsy miangatra amin’izay tena mahasoa amin’ity hoe fitiavan-tanindrazana… hirahiraina lava. Na misy izay mety mahasoa ny vahoaka aza, toherina fotsiny izao.Aza gaga raha tsy miova koa ny fomba fanaovana politika, ny fijerin’ny maro ny mpanao politika sy ny fanaovana politika… Lazaina fa tsy misy inona miova eto noho ny tsy fijerena amin’ny maso tsy miangatra. Tsy ny tena mpitsikera befahatany noho ny fiheveran-tena diso ve no tsy misy fiovana voalohany amin’ny maso tsy miangatra?Rafaly Nd. L’article Amin’ny maso sy mahasoa… tsy miangatra a été récupéré chez Newsmada.
EIC Corporation: mampiroborobo ny kolontsain’ny fandraharahana sy fampiasam-bola
Tokony ho notanterahina teto Madagasikara ny fivoriana andiany fahafito maneran-tany momba ny lalana hafa ho an’ny famatsiam-bola (Sifa) miaraka amin’ny EIC Corporation, izay fikambanana iraisam-pirenena mampiroborobo ny kolontsaina fandraharahana sy ny fampiasam-bola. Hetsika nanamarihana izany, nasolo ny fandraisana ny fivoriana (tsy azo notanterahina noho ny fisian’ny valanaretina) ny fikarakarana famelabelaran-kevitra ho an’ny mpianatra tao amin’ny lycée technique professionnel Ampefiloha sy ireo avy amin’ny oniversite. Niompanan’ny fifampizarana ny fampianarana avy eny ifotony ny fahaizana mampiasa vola. Trandrahina ny talentan’ny mpianatra ary ampianarina izy ireo hamolavola tetikasa avy amin’ny talentany avy. Raha voamarina fa mahomby ny tetikasa dia ampiana ireo mpianatra hanatanteraka izany, hoy ny filohan’ny EIC Madagasikara, i Shariff Bonnie, ny faran’ny herinandro teo teny Ampefiloha.Fotoana hiantsoana ny olona hampiasa vola eto amintsika ny fivoriana iraisam-pirenena Sifa ary efa eo am-pananganana ny rafitra malagasy ny mpiandraikitra. Firenena 50 no mpikambana ary ahitana olona 2 500 mandrafitra ny EIC Corporation miorina any Côte d’ivoire. Sehatra ahafahan’ny mpamatsy vola sy ireo mpitantana orinasa mitady famatsiam-bola mifanerasera izany. Misy klioba ho an’ny fampiasam-bola 330 ao anatin’ny EIC Corporation afaka mamatsy vola tetikasa samihafa. Ny tapany hariva, nanao fivoriana ampitain-davitra niaraka tamin’ireo mpikambana vahiny ny teto Madagasikara.VonjyL’article EIC Corporation: mampiroborobo ny kolontsain’ny fandraharahana sy fampiasam-bola a été récupéré chez Newsmada.
Andohatapenaka: nirefodrefotra ny basy, jiolahy iray rotiky ny balan’ny polisy
Hatairana vao maraina ny an’ireo olona mipetraka eny Andohatapenaka sy ny manodidina raha nandre ny firefodrefotry ny basy, ny asabotsy teo. Jiolahy mpanakan-dalana no nifanehatra tamin’ny polisy. Jiolahy iray lavon’ny bala raha azo sambo-belona kosa ny namany iray hafa…Polisy misahana ny ady amin’ireo jiolahy mitam-piadina mahery vaika (SAG) sy ny ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahafito (CSP7) 67ha ireto nifampitana tamin’ny jiolahy mpanakan-dalana teo Andohatapenaka ireto. Raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny polisin’ny Sag, tamin’io fotoana io, tokony ho tamin’ny 2 ora sy 30 mn maraina, nahazo angom-baovao ny polisy fa misy andian-jiolahy mitondra basy sy antsy lava manao sakan-dalana amin’ny sarety miisa telo ny lalana etsy Andohatapenaka. Taxi-be iray nitondra mpivarotra legioma vao maraina no tratran’ny sakana nataon’ireto jiolahy ireto. Niditra an-keriny tao anaty fiara izy ireo ka lasan-dry zalahy avokoa ny vola hatramin’ny firavaka tany amin’ireo mpandeha. Fotoana fohy taorian’izay, tonga teny an-toerana ny polisy nanao ny fanarahan-dia ireto olon-dratsy ireto, nanamafy rahateo ireo mpandeha voatafika fa mbola tsy lasa lavitra ry zalahy. Raikitra ny fanenjehana nataon’ny polisy ka tratra teo Ankasina ireto andian-jiolahy ireto. Raikitra ny fifampitifirana ka maty voatifitra ilay jiolahy nitondra basy. Azo sambo-belona kosa ny jiolahy iray hafa. Basy kilalao no nentin’ireo jiolahy nampihorohoro… Tao anatin’ny tebiteby no niainan’ireo mponina teny amin’ny manodidina ny toerana nisian’ny fifampitifirana. Tafaporitsaka nandritra ny fifanjevoana ny jiolahy roa hafa. Nandritra ny fizahana no nahitana fa basy kilalao no nampiasain’ireto jiolahy ireto nandritra ity fandrobana ity, ankoatra ilay antsy lava hita tany amin’izy ireo. Nanamafy ny polisy fa mitohy ny ezaka ataon’izy ireo amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, indrindra amin’izao ankatoky ny fety fankalazana ny tsingerin-taona nahazoana ny Fahaleovantena izao. Fantatra fa ao anatin’ireo tambajotran-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana eto an-drenivohitra ry zalahy ireto, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy hatrany.Jean ClaudeL’article Andohatapenaka: nirefodrefotra ny basy, jiolahy iray rotiky ny balan’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.